Noloshu dhadhan malahan adiga la,aantaa - Waan ku jecelahy qalbi
Sidee loo qoraa erayo jaceyl oo amaan ah?
Waa maxay Erayo Jaceyl ah? Sideese ugu qori kartaa qof aad jaceyl u qaaday erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh?
Jawaabta waa mid fudud: Halkaan sidoo kale waxaan kuugu diyaarinay erayo kale gaar ahan macaan erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh riix oo kaliya
Hadaba adeegso erayadaan soo socdo si,aad qalbigeeda/qalbigiisa u hanato una dareensiiso jaceylka aad u qabto iyada/asiga.
Haddii aad xiiseyneyso erayo kale oo jaceyl ah riix halkaan oo ka akhriso: Geeraar jaceyl oo amaan ah